मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानको अन्तिम सभा महेन्द्रनगर सम्पन्न, भारतीय सुरक्षा फौजबाट मारिएका गोविन्द गौतमका परिवारलाई पार्टीका तर्फबाट पाँच लाख रुपियाँ प्रदान
नेकपा (एमाले) ले फागुन २१ गते पूर्वको झापाबाट सुरु गरेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गतको अन्तिम सभा आज कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित खुल्ला मञ्चमा सम्पन्न भएको छ । धनगढीमा सभा सकेर महेन्द्रनगर जाँदा अभियानको केन्द्रीय टोलीलाई राजमार्गको किनारामा बसेका ठूलो जनसमुदायले हार्दिक स्वागत गरेका थिए ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयोः
एमाले कमजोर भयो भने देश कमजोर हुन्छ । एमालेसँग देशलाई कमजोर बनाउन चाहने तत्व कति आतंकित हुँदा रहेछन् भन्ने देख्नुभयो होला । हामी पूर्वबाट हिँडेपछि भाला, लाठी, ढुंगामुढा बोकेर आए । हामीले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक परिपाटीविपरीत प्रस्तुत भए । शान्तिपूर्ण रुपमा सभ ागर्न नदिने तत्वलाई जनताले चिनेका छन्, चिन्छन् ।
एमालेका नेताहरुमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने, नेताहरुको हत्या गर्ने उनीहरुको प्रयास सफल भएन । हामीमाथि आक्रमण गर्न प्रहरीले दिएन भनेर प्रहरीमाथि आक्रमण भयो । काठमाडौंँको आरामदायी सोफामा बसेका, एसी लगाएका, कानमा फोन लगाउनेहरुले आक्रमण गर्न आदेश दिन्छन् । ४८ जना प्रहरी घाइते बनाइयो । हत्याको जिम्मा तिनले नै दिनुपर्छ ।
एमाले जहाँ पुग्यो, त्यहाँ बन्द गर्छन् । किन ? किनभने, सूर्य जहाँ पुग्छ, त्यहाँ उज्यालो हुन्छ । त्यही भएर तिनीहहरु आत्तिएका छन् । म भन्न चाहन्छु, हत्केलाले आफ्नो आँखा छेक्न सकिएला, सूर्यलाई छेक्न सकिन्न । यस्ता षड्यन्त्रलाई पराजित गरेर दृढतापूर्वक अघि बढ्ने जनतालाई धन्यवाद दिन्छु ।
कतिपय बुद्धिजीवीहरुले एमालेलाई दोष दिने कोसिस गरेका छन् । शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न नदिनेहरुको नियत सबैले देखेका छन् । यसबाट सबै कुरा छर्लंग भएको छ ।
कञ्चनपुरको आनन्दनगरमा गोविन्द गौतमको हत्या गरेको छ । यो अत्यन्तै निन्दनीय छ ।
भारतले ठूलो देशको अहंकार छाड्नुपर्छ, नेपाल र नेपालीसँग माफी माग्नुपर्छ, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि भनेको छु, तपाईंले भारतसँग माफी माग्न भन्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ ।
शहीद गोविन्द गौतमको परिवारलाई एमालेले सम्मानस्वरुप ५ लाख रकम उपलब्ध गराउँछौँ । छोरीहरुको शिक्षादिक्षाका लागि चिन्ता नलिनूस्, अरु कोही छैन भने एमाले छ ।
नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ । नेपालको अन्तर्राष्टिय पारवहनको अधिकार पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्री भएको बेला हिन्द महासागरसम्म नेपालको झण्डा भएको पानीजहाज चलाउने भनेपछि केही कुवाका भ्यागुताहरु कराए ।
पार्टीको आकारले के गर्ने ? हेनूृस् त कांग्रेस आकार हेर्दा भैँसीको जत्रो छ । भारी चाहिँ बाख्र्राको जत्रो पनि बोक्न सक्दैन । माथि बस्नेहरुलाई कांग्रेस चाहिएको होला । जनतालाई किन चाहियो कांगे्रस ? आउनूस्, एमालेमा स्वागत छ ।
पहाड र तराईलाई छुट्याउने षड्यन्त्रस्वरुप संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको छ । यसलाई पारित हुन दिन्नौँ, ढुक्क हुनूस्, एमालेले पारित हुन दिँदैन ।
निर्वाचन नगराउने हो भने जनताले नालायक सरकारलाई जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् ।
रहर गरेर के गर्ने ? हामीले नौ महिनामा चीन र भारत भ्रमण गर्यौँ । नाकाबन्दी खुलायौँ । सन्धिहरु गर्यौँ । तर, यो सरकारले आठ महिनामा के गर्यो ? चुइँगम चपाएर बस्यो । केही गरेको देख्नुभएको छ ?
बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भन्नुभयोः
मेचीदेखि महाकालीसम्म आइपुग्दासम्म अपार जनसमर्थन देखिएको छ । यसबाट हामी उत्साहित भएका छौँ । हाम्रा प्रतिद्वन्द्वीहरुको सातो गएको छ, होसहवास उडेको छ । मलाई डर लाग्दैछ, कतै एमालेको लोकप्रियता देखेर स्थानीय निर्वाचनको घोषणालाई निरर्थक बनाउने त होइनन् ? म खबरदारी गर्न चाहन्छु, निर्वाचनको मैदानबाट नभाग्नूस् ।
९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधान सफल बनाउन निर्वाचन गर्नैपर्छ । यदि चुनाव गराउन सक्नुहुन्न भने अहिले भन्नूस्, कुर्सी त्याग्नूस्, हामी गराउँछौँ ।
नेपाली भूमि मिचिँदा कञ्चनपुरमा सीमाका जनताले प्रतिवाद गरे, सप्तरीमा त्यस्तै हुँदा त्यहाँका जनताले विदेशीलाई लखेटिदिए । सीमा मिचिँदा सिमानाकै मान्छेले रक्षा गर्ने हो । एमाले यसमा प्रस्ट छ र जहिले पनि मधेसी जनताका पक्षमा छ ।
मधेस, जनजातिका मामिलामा कागले कान लगे जस्तो हल्ला चलाइरहेका छन् । एमालेलाई मधेसविरोधी पार्टीका रुपमा चित्रित गर्न खोज्ने मधेसी मोर्चाको सपना पूरा हुन दिँदैनौँ ।
संविधानले सबैलाई बराबर अधिकार दिएको छ । अझ कतिपयका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । मधेसी, महिला, जनजाति, दलित आदिका लागि विशेष आयोगहरुको व्यवस्था गरेको छ । यति व्यवस्था गरेको संविधानले विभेद गर्यो भन्न मिल्छ ?
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरु एमालेले गर्यो, अहिले दुई हजार रुपियाँ पनि यसैले पुर्याएको छ । गाउँमा बजेट आउने व्यवस्था एमालेले नै सुरु गरेको हो ।
आनन्दनगरको विषयमा नेपालले भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ । नेपालका गाउँगाउँमा पुगेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले गरेको अपमान हामीलाई स्वीकार्य छैन, स्वीकार गर्दैनौँ । सरकारले यसमा लाचारी देखाएको छ ।
महासचिव ईश्वर पोखरेलले भन्नुभयोः
एमाले राष्टियताको आन्दोलनको पहरेदारका रुपमा रहँदै आएको छ, रहिरहनेछ । हिजो मदन भण्डारीको नेतृत्वमा राष्टियताको आन्दोलन आज केपी ओलीको नेतृत्वमा जारी छ ।
आनन्दनगरमा घाइते भएका टीकाराम चापागाईंको उपचारको जिम्मा एमालेले लिन्छ ।
नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यो पूरा हुन दिँदैनौँ ।
हाम्रो नेतृत्वको सरकारले मुलुकका पक्षमा अडान लिँदा नौ महिनामै गिराइयो । नेपाल अब कुनै एक मुलुकसँग अडेस लागेर बस्न सक्दैन । हामीले यही भन्दा हाम्रा मित्र भन्नेहरुले षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । देशभित्रै तिनका मतियारहरु सक्रिय छन् ।
आनन्दनगरमा भारतीय सुरक्षा फौजबाट मारिएका गोविन्द गौतमका परिवारलाई पार्टीका तर्फबाट प्रदान गरिएको पाँच लाख रुपियाँको चेक अध्यक्ष ओलीले पार्टीका कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष तारा लामा तामाङलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावल, बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य निरा जैरुलगायतले बोल्नुभएको थियो ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार ज्ञवालीको अध्यक्षता र बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य विक्रमबहादुर शाहीको सञ्चालनमा आयोजित सभामा सहभागाीहरुलाई कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष तारा लामा तामाङले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
भोलि विहान ९ बजे कञ्चनपुरस्थित पार्टीको जिल्ला कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विधिवत् रुपमा अभियानको समापन गरिनेछ ।